देखाईन्छ र अधिक गर्दैका लागि MAF को दृष्टिकोण
Tomás Quiñonez मा मे 13, 2021 द्वारा लिखित।
खोपहरू बाहिर निस्केपछि हामीमध्ये धेरैले लामो सुरुnelको अन्त्यमा एउटा प्रकाश देख्छौं। तर यो उज्यालो आप्रवासी परिवारहरूको लागि अस्पष्ट छ जुन बारम्बार संघीय COVID-19 राहतबाट वञ्चित गरिएको छ।
जब हामी निको हुन खोज्छौं, हामी कसरी देखाउन सक्छौं र आप्रवासी परिवारहरूको आर्थिक जीवन छिटो पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्न थप गर्न सक्छौं?
म Tuesday्गलबार, मे ११, हामीले एमएएफको भविष्यका लागि एउटा दर्शन प्रस्तुत गर्‍यौं र हामी सबै कसरी sectors क्षेत्रहरूमा - आप्रवासी र कम आय भएका परिवारहरूको लागि बढी देखाउन र गर्न सक्ने कुरा छलफल गर्न भेला भएका छौं।
२०२० लाई दर्शाउँदै
महामारीको सुरूमा, एमएएफ टोली द्रुत गतिमा सारियो जुन महत्त्वेपूर्ण ढ in्गले देखाउनको लागि देखा पर्‍यो। हामीले आप्रवासी परिवारहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन एक द्रुत प्रतिक्रिया कोष आरम्भ गर्यौं जुन महामारीको कारणले अत्यन्त सताईएको थियो र स federal्घीय सहयोग अस्वीकार गर्‍यो। हामीले अन्तिममा छोडेका परिवारहरूलाई सीधा सहायता पुर्‍यायौं र कम्तिमा उनीहरूलाई यस संकटमा मौसम दिन सहयोग पुर्‍याउन। अप्रिल २०२० मा कोषको सुरुवात भएदेखि, एमएएफले आप्रवासी परिवार, साना व्यवसाय मालिक र विद्यार्थीहरूलाई ,000०,००० भन्दा बढी अनुदान र गणना वितरण गरेको छ। यहाँ दृश्य कसरी भयो यो पछाडिको पर्दाको कहानी हो।
भविष्यको लागि हाम्रो दृष्टिकोण
एमएएफका सीईओ होसे क्युओनेजले भिडियो बन्द हुने बित्तिकै भने, यो काम सकिएको छैन, र हामी यो एक्लै गर्न सक्दैनौं। एक संगठनको रूपमा, हामी उही आधारबाट अगाडि बढ्दैछौं जसले हामीलाई विगत १ years बर्षमा निर्देशित गरेका छन: समुदाय सेन्टर गरिएको दृष्टिकोण हामीले सेवा गर्ने मानिसहरूमा केन्द्रित छ।
हाम्रो समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोण वास्तवमा एकदम सरल छ। हामी ग्राहकहरू भेट्दछौं जहाँ उनीहरू छन् र कार्यक्रमहरू बनाउँदछन् जुन उनीहरूको जीवनमा राम्रो र सत्य छ भनेर बनाउँछन्। हामी टेक्नोलोजी र फाइनेन्सको प्रयोग गरेर समाधानहरू स्केल गर्ने कार्य गर्दछौं किनकि हामीलाई थाहा छ कि वित्तीय सुरक्षा हरेक सपना साकार भएको आधारभूत हुन्छ। र हामी प्रणालीगत परिवर्तनको लागि हाम्रो सामूहिक शक्तिको वकालत गर्न र व्यवस्थित गर्न हाम्रो शिक्षा र अन्तर्दृष्टि प्रयोग गर्दछौं।
यो समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोण राम्रो काम गर्नका लागि हाम्रो मार्गनिर्देशन हो जुन जड, समयबद्ध र हामीले सेवा गर्ने समुदायहरूमा सान्दर्भिक छ। यो हामी कसरी अर्थपूर्ण सामाजिक परिवर्तन महसुस गर्न सक्छौं। यो केवल सिद्धान्त होईन।
हामी हाम्रो ग्राहकहरु सुन्दा सुरूवात गर्दछौं।
महामारीको कारण, आप्रवासीहरू उनीहरूको पूर्व-महामारीको १ 15१TP११ टी मा मात्र बाँचेका छन्। परिवारहरू उपयोगिता बिल र भाडामा पछाडि पसेका छन्। केहि हजारौं डलर owण छ कि भविष्य मा तिर्न गाह्रो हुन्छ। एमएएफको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा हामीले पत्ता लगायौं कि १० मध्ये4परिवारहरू भाडामा र घर खाली गर्ने खतरामा छन्।
र यो सबै त्याग्न सकिन्थ्यो। आप्रवासी परिवारहरू उत्तेजक चेकहरूमा $11,400 सम्म अस्वीकृत गरियो।
प्रायः परिवारहरूले आफ्नो मासिक बिलहरू $1,200 को साथ पूरा गर्न सक्दछन्। अर्को शब्दहरूमा उत्तेजक जाँचहरूले आप्रवासी परिवारहरूलाई नौ महिना वा सो भन्दा बढीको लागि आफ्नो बिलहरू कभर गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
हामी नयाँ उत्पादहरूको साथ ग्राहक वास्तविकतालाई जवाफ दिन्छौं।
MAF ले आप्रवासी परिवार रिकभरी कोष (IFRF) $25 मिलियन बीउ कोष को साथमा यी अन्तरदृष्टिहरु लाई परिवारहरु लाई निको पार्न मद्दत गर्न को लागी शुरू गरीरहेको छ।
यो कोषले बच्चाहरु संग २,५०० परिवारहरुलाई दुई बर्ष सम्म प्रति महिना १TP2T300 को नगद अनुदान प्रदान गर्दछ। MAF को रिकभरी कोष देश भर मा दस्तावेजीकृत आप्रवासी जो संघीय सहायता बाट बहिष्कृत गरीएको छ मा केन्द्रित हुनेछ। हामी कम से कम आय स्रोतहरु र धेरै वित्तीय तनावहरु संग सीमान्तकृत परिवारहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न इक्विटी अगाडि र केन्द्र राख्दै छौं।
हामी नगद अनुदान बाहिर पार गर्दैछौं। हामी परिवारलाई वित्तीय कोचिंग, शिक्षा र स्वयं अधिवक्ता प्रशिक्षण संग छिटो निको हुन मद्दतको लागि प्रत्यक्ष, समय र प्रासंगिक सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौं। हामी आप्रवासी परिवारहरूसँगको हाम्रो सment्लग्नताको बारेमा सबै कुराको मूल्या and्कन र अध्ययन गर्ने योजना गर्छौं ताकि हामी के काम गर्छौं, कथाहरू साझा गर्न सक्छौं र वास्तविक समयमा नीति परिवर्तनको लागि जोड दिन सक्छौं।
हामी के मापन गर्छौं।
हामी प्रयास भएका र सही कार्यक्रमहरू पनि विस्तार गर्दैछौं जुन काम गर्दछ - हामी हाम्रो लामो ट्र्याक रेकर्डमा सफलतापूर्वक परिवारहरूलाई मद्दत गर्दछौं कि उनीहरूको वित्तीय जीवनमा सुधार ल्याउन हाम्रो क्रेडिट-निर्माण कार्यक्रमहरूको विस्तार गरेर।
हामी $6M मा लगानी गर्दैछौं Lending Circles, हाम्रो पुरस्कार जित्ने कार्यक्रम जुन एक अर्कालाई मद्दत गर्न मानिसहरू एक साथ आउनेको अनन्त परम्परामा जडित छ। हामी $10M मा लगानी गर्दैछौं अध्यागमन loansण मानिसहरूलाई नागरिकता, DACA वा ग्रीन कार्डहरूको लागि आवेदन दिन मद्दत गर्न। हामी पनि $9M मा लगानी गर्ने योजना सानो व्यवसाय मालिकहरू, उद्यमीहरू जो उनीहरूलाई विश्वास गर्न उनीहरूको पहिलो nderणदाता चाहिन्छ र उनीहरूको सपना।
हामी संलग्नताको संस्कृति सिर्जना गर्दछौं।
वित्तीय सुरक्षा भनेको वित्त मात्र होईन। यो शक्ति र आवाज को बारे मा छ। यस कारणका लागि, हामी हाम्रो टेक्नोलोजीमा हाम्रो ग्राहकहरूको संलग्नताको संस्कृति सक्षम गर्न लगानी गरिरहेका छौं।
टोलीले हाम्रो MyMAF अनुप्रयोग र SMS प्लेटफर्म विस्तार गर्दै कडा मेहनत गरीरहेको छ कि त्यस मुद्दाहरूको बारेमा प्रासंगिक, पहुँचयोग्य जानकारी प्रदान गर्न। यी प्रविधिहरूले ग्राहकलाई व्यक्तिगत देखि राष्ट्रिय स्तरमा कार्य गर्न शक्ति दिइरहेका छन्। अन्तमा, ग्राहकहरु राम्रो समाधान गर्न को लागी क्षेत्र नेतृत्व गर्न सक्दछ।
यो देखाउन र अधिक कार्यको लागि हाम्रो दृष्टिकोण हो।
हामी अर्को तीन बर्षमा $70M लगानी गर्दै छौं हाम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्न र आप्रवासी परिवारहरूलाई छिटो पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्न हाम्रा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न।
हामीलाई थाहा छ कि अधिक उचित भविष्य निर्माण गर्ने अगाडिको बाटो लामो छ, तर हामी सबै मिलेर सुरु sureको अन्त्यमा बत्ती उज्यालो छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्दछौं आप्रवासी परिवारहरूको लागि।
त्यसोभए, तपाईं कसरी अझ बढी देखाएर र अधिक गरेर मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई यसमा एक नजर लिन आमन्त्रित गर्दछौं वेबिनार रेकर्डि। जहाँ हामी अर्को तीन बर्षको लागि हाम्रो दृष्टि राख्यौं।
तपाईं हाम्रो परोपकारी टोलीमा पुगेर हाम्रो प्रोग्रामहरूलाई कसरी समर्थन गर्ने बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ [email protected].
हामी आप्रवासन परिवार रिकभरी कोष शुरू गर्नाले अपडेटहरूका लागि हामीसँग हामीसँगै लाग्न प्रोत्साहन गर्छौं।
अन्त्यमा, हामीसँग आपसी आप्रवासी र कम आय भएका परिवारहरूको लागि #homingUpDoingMore हो कसरी सामाजिक मिडिया मा साझा गर्नुहोस्।